Ophelia for quartet iyo guitar - David Warin Solomons 'Catalog Music
Home / Aaladda / strings / Dhinacyada afar geesoodka ah / Ophelia loogu talagalay quartet iyo guitar
Ophelia loogu talagalay quartet iyo guitar
Categories: Dhinacyada afar geesoodka ah, La Folia Isbeddelka, La Folia
Iyada oo ku saleysan meedheyda gabayada goobta muuqaalka ah ee Shakespeare ee ciyaarta Hamlet oo Ophelia ay maskaxdeeda ka lumisay murugo ay u tahay aabbaheed la dilay.
Habka isdhexgalka ee muusigga ayaa raacaya xaaladeeda maskaxda.
Codka ugu muhiimsan (Codka Ophelia ee asalka ah) waxaa la qaadaa qoryaha.
Mawduuca qunyar-socodka ah ee lagu ciyaaro cello wuxuu ku salaysan yahay heesaha "La Folia" ee Portuguese-ka.
Isbedelada isbeddelka waa sidan soo socota:
Hannaanku wuxuu ka bilaabmaa Frigian (D yar yar laakiin leh labaad).
Hababka ayaa isbeddelaya Khamaj Theta (oo ay ku jiraan kaalinta toddobaad ee hoose) kadibna Kalyan Theta (oo leh darajo afaraad leh) iyadoo Ophelia uu noqonayo iftiin badan.
Wareegyadu waxay u jihaad galiyaan xarfaha iyo tartanka Scotch, kuwaas oo xoogga saaraya iftiinkan ku-meel-gaadhka ah.
Marka ay billaabato inay ku dhawaaqdo su'aasha ah "miyuu mar kale iman doonin?" Ayaa u muuqda isbeddelka Marva Theta (waa weyn laakiin wuxuu la mid yahay kii labaad oo kor u kacay iyo afaraadna kor u kacay), laakiin tonicku hadda waa semitone ka badan meeshii ay billaabatay.
Habkani wuxuu ugu dambeyntii is bedelayaa ilmo yar oo caan ah (Aeolian) marka ugu dambeysa iyada oo is-casilay nafteeda.
Noqo kuwa ugu horreeya ee dib u eega "Ophelia for quartet quit iyo guitar" Cancel reply
Jellicle Catgut - quartet string
A la soco afarta jibaaran
Ostinato 12 - quartet string
Waxaa jira Rose Rose ah ee bassoon iyo orchestra string ama quartet string Robin Hood waxa uu awood u leeyahay Bishop of Hereford si uu u qoob-ka-cayaaro afar geesoodka
Waxaan ugu talagalnay Siyoon qadka saxophone-ka
Aad arkaysid: Ophelia loogu talagalay quartet iyo guitar